वेरोजगार हुनुहुन्छ??म्यादी प्रहरीको लागि भर्ना खुल्यो, – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
वेरोजगार हुनुहुन्छ??म्यादी प्रहरीको लागि भर्ना खुल्यो,
चैत्र ११, २०७३ ०७:१८ मा प्रकाशित
इसरोकार संवाददाता ११ चैत, काठमाडौं । सरकारले आगामी बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी म्यादी प्रहरी भर्ना आहृवान गरेको छ । प्रहरीको प्रधान कार्यालय नक्सालले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी ७५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना आहृवान गरेको हो । म्यादी प्रहरीमा ७५ वटै जिल्लाबाट युवायुवतीले आवेदन दिन सक्नेछन् ।